Wood Midho Emboss Taxanaha
Taxanaha marmar ah
WPC vinylalkohol Gogosha
Shirkadda Changzhou Lingdian Wood ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2003. aagga geedka waa 80,000 oo mitir oo laba jibbaaran. Waxaan nahay shirkad keentay berrinkii Gogosha vinylalkohol, wpc Gogosha vinylalkohol iyo sagxadda dhulka SPC ee Shiinaha.
Waayo, dhulka vinylalkohol, our awoodda waa in ka badan 150 weelasha bil kasta; Waayo, dhulka vinylalkohol wpc. Our awoodda waa in ka badan 150 weelasha bil kasta; Waayo, dhulka SPC, Our awoodda waa in ka badan 50 weelasha bil kasta.
Shirkadda Our alread maray nidaamka shahaadada ISO9001 maaraynta tayada, ISO14001 maamulka deegaanka nidaamka shahaado iyo shahaado CE shirkadda baaritaanka TUV. Waxaan ka helnay liisanka patent ee Unilin for Gogosha laminate iyo sagxadda dhulka vinylalkohol labadaba. Mashiinka Good-soo-saarka, mashiinka baaritaanka wanaagsan oo tayo adag gacanta ku hayn waxyaabaha our ee heer tayo sare leh.
Our khayraadka aadanaha badan iyo waayo-aragnimo la dhoofiyo, maamulka sare waxay nagu mid tartan in industry decoration. Waxaan hadda dhoofin 95% wax soo saarka si ay u USA, Canada, South America iyo Bariga Europe iyo wixii la mid ah. Our bartilmaameed waa in la siiyo badeecadaha oo deggan iyo tayo sare leh idinka iyo aad nolol fiican.
Saaxiibada caalamka oo Welcome to booqo Shirkadda iskaashi dheeraad ah.